မအိုဆေး တွေ့ပြီ – DigitalTimes.com.mm
ပြန်လည်နုပျိုနိုင်စွမ်းဆိုတာ လူတော်တော်များများ တောင့်တကြတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ နုပျိုချင်လွန်းလို့လည်း ဆေးထိုးကြတာတွေ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြတာတွေ ဒါတွေခေတ်မကုန်သေးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အချိန်တန်တော့ ဇရာပြလာတဲ့အချိန်မှာ ဆေးတွေဘာတွေနဲ့လည်း ထိန်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြန်လည်နုပျိုအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်တမ်းလက်တွေ့ဘဝနဲ့ အရမ်းကို အလှမ်းဝေးနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်…လူရဲ့ဆဲလ်တွေကို ပြန်လည်နုပျိုတဲ့ဆဲလ်တွေဖြစ်အောင်ဓာတ်ခွဲခန်းမှာအောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကျဆင်းလာပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူသားတွေခံစားရတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ ကင်ဆာလိုရောဂါတွေ၊ ဆီးချိုရောဂါတွေ၊ သတိမေ့စိတ်မမှန်တော့တာတွေက အသက်ကြီးလာတာနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်တွေ တစ်ရှူးတွေ အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာ အကြောင်းရင်းအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိုမင်းရင့်ရော်လာခြင်းမှာတော့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ တစ်ရှူးတွေမှာရှိတဲ့ မသန်စွမ်းတော့တဲ့ဆဲလ်တွေ တဖြည်းဖြည်းစုစည်းများပြားလာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပဲ ရှိပါတယ်။ ဆဲလ်တွေအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာ မသန်စွမ်းတော့ဘဲ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အပြင် ဘေးနာမှာရှိတဲ့ဆဲလ်တွေကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။
အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ ဆဲလ်တွေကပါ ဘာလို့လိုက်ပြီးမသန်စွမ်းတော့တာလဲ?? ဖြစ်နိုင်တာကတော့ DNA က တစ်ဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းလာလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီစမ်းသပ်ချက်အတွက် အသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆီက သွေးနမူနာတွေ မတူညီတဲ့တစ်ရှူးအမျိုးအစားတွေမှာစမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတော့ အိုမင်းရင့်ရော်တဲ့ဆဲလ်တွေကို ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလ်ဖိုက်အနည်းငယ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းနဲ့စမ်းသပ်ပြီး ဆဲလ်တွေပြန်လည်နုပျိုလာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပမာဏအရမ်းများရင် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ဆဲလ်တွေကိုပဲ တိုက်ရိုက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းရှာခဲ့ကြပါတယ်။ အခုတော့ အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း တတ်နိုင်သလောက်နည်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
သက်ရှိလူတွေမှာ မသန်စွမ်းတော့တဲ့ ဆဲလ်အိုဟောင်းတွေရှိနေခဲ့ရင် ဒါကိုအသုံးချပြီး လုံးဝဖယ်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတာတွေ အသက်ကြီးလာလို့ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကောင်းအဖြစ် ရည်ရွယ်စမ်းသပ်ခဲ့ကြတာပါ။ အနာဂတ်တစ်ချိန်မှာ ဖြစ်လာတော့မယ့် အစကောင်းတစ်ခုကိုတော့ စတင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ပဲဆိုရမှာပါ။ စမ်းသပ်ခဲ့သူတွေကတော့ Lorna Harries (Associate Professor in Molecular Genetics, University of Exeter and Matt Whitman), Professor of Experimental Therapeutic, University of Exeter) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပွနျလညျနုပြိုနိုငျစှမျးဆိုတာ လူတျောတျောမြားမြား တောငျ့တကွတဲ့အရာတဈခုပါ။ နုပြိုခငျြလှနျးလို့လညျး ဆေးထိုးကွတာတှေ ခှဲစိတျပွုပွငျကွတာတှေ ဒါတှခေတျေမကုနျသေးတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အခြိနျတနျတော့ ဇရာပွလာတဲ့အခြိနျမှာ ဆေးတှဘောတှနေဲ့လညျး ထိနျးလို့ရမှာမဟုတျပါဘူး။ ပွနျလညျနုပြိုအောငျလုပျဖို့ဆိုတာ တကယျတမျးလကျတှဘေ့ဝနဲ့ အရမျးကို အလှမျးဝေးနပေါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့…လူရဲ့ဆဲလျတှကေို ပွနျလညျနုပြိုတဲ့ဆဲလျတှဖွေဈအောငျဓာတျခှဲခနျးမှာအောငျမွငျစှာ စမျးသပျနိုငျခဲ့ပါပွီ။
အသကျအရှယျရလာတာနဲ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့စှမျးဆောငျရညျတှေ ကဆြငျးလာပွီး တဈခါတဈရံမှာ လူသားတှခေံစားရတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ ကငျဆာလိုရောဂါတှေ၊ ဆီးခြိုရောဂါတှေ၊ သတိမစေိ့တျမမှနျတော့တာတှကေ အသကျကွီးလာတာနဲ့ဆကျစပျနတေယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ခန်ဓာကိုယျဆဲလျတှေ တဈရှူးတှေ အလုပျမလုပျတော့ဘူးဆိုတဲ့နရောမှာ အကွောငျးရငျးအမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိုမငျးရငျ့ရျောလာခွငျးမှာတော့ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှေ တဈရှူးတှမှောရှိတဲ့ မသနျစှမျးတော့တဲ့ဆဲလျတှေ တဖွညျးဖွညျးစုစညျးမြားပွားလာခွငျးဆိုတဲ့အကွောငျးရငျးပဲ ရှိပါတယျ။ ဆဲလျတှအေခြိနျကွာလာတဲ့အခါမှာ မသနျစှမျးတော့ဘဲ လုပျငနျးဆောငျတာတှကေို ကောငျးကောငျးမလုပျနိုငျတော့တဲ့အပွငျ ဘေးနာမှာရှိတဲ့ဆဲလျတှကေိုပါ ထိခိုကျစပေါတယျ။
အသကျအရှယျရလာတာနဲ့အမြှ ဆဲလျတှကေပါ ဘာလို့လိုကျပွီးမသနျစှမျးတော့တာလဲ?? ဖွဈနိုငျတာကတော့ DNA က တဈဖွညျးဖွညျးယိုယှငျးလာလို့ပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒီစမျးသပျခကျြအတှကျ အသကျကွီးတဲ့သူတှဆေီက သှေးနမူနာတှေ မတူညီတဲ့တဈရှူးအမြိုးအစားတှမှောစမျးသပျကွညျ့ခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီတော့ အိုမငျးရငျ့ရျောတဲ့ဆဲလျတှကေို ဟိုကျဒရိုဂငျြဆာလျဖိုကျအနညျးငယျထုတျပေးနိုငျတဲ့ ဓာတုပစ်စညျးနဲ့စမျးသပျပွီး ဆဲလျတှပွေနျလညျနုပြိုလာအောငျ လုပျဆောငျနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပမာဏအရမျးမြားရငျ အဆိပျအတောကျဖွဈစနေိုငျတဲ့အတှကျ လိုအပျတဲ့ဆဲလျတှကေိုပဲ တိုကျရိုကျပို့ပေးနိုငျဖို့ နညျးလမျးရှာခဲ့ကွပါတယျ။ အခုတော့ အောငျမွငျစှာစမျးသပျနိုငျခဲ့ပွီဖွဈပွီး ဘေးထှကျဆိုးကြိုးလညျး တတျနိုငျသလောကျနညျးအောငျပွုလုပျနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။
သကျရှိလူတှမှော မသနျစှမျးတော့တဲ့ ဆဲလျအိုဟောငျးတှရှေိနခေဲ့ရငျ ဒါကိုအသုံးခပြွီး လုံးဝဖယျထုတျနိုငျမယျဆိုတော့ အသကျအရှယျကွီးရငျ့လာတာတှေ အသကျကွီးလာလို့ဖွဈတတျတဲ့ရောဂါတှကေို ဖွရှေငျးနိုငျမယျ့နညျးလမျးကောငျးအဖွဈ ရညျရှယျစမျးသပျခဲ့ကွတာပါ။ အနာဂတျတဈခြိနျမှာ ဖွဈလာတော့မယျ့ အစကောငျးတဈခုကိုတော့ စတငျနိုငျခဲ့ပွီလို့ပဲဆိုရမှာပါ။ စမျးသပျခဲ့သူတှကေတော့ Lorna Harries (Associate Professor in Molecular Genetics, University of Exeter and Matt Whitman), Professor of Experimental Therapeutic, University of Exeter)